विकृति र विसङ्गति बढ्‍नुको प्रमुख कारण (सेक्सप्रतिको गलत बुझार्इ) – Enayanepal.com
विकृति र विसङ्गति बढ्‍नुको प्रमुख कारण (सेक्सप्रतिको गलत बुझार्इ)
२०७३, ५ चैत्र शनिबार मा प्रकाशित
Ram B Sham (Sadhak)
– राम वि शाम (साधक)
मेरो न्वारनको नाम अञ्जली हो तर दुनिँयाले भालु, वेश्या, रण्डी यस्तै धेरै उपनामले चिन्छ । यी मेरा चर्चित उपनाम तपार्इहरुले नै राखिदिनुभएको हो । अब नाम नै काफि छ त्यसैले मैले गर्ने काम यहाँहरुलार्इ बतार्इरहनु परेन क्यारे । मैले काम गर्ने अफिसहरु र अफिसका हाकिम पनि फरक-फरक हुने गर्छन । होटल, घर, वनपाखाहरु यी यस्तै मेरा अफिसका नामहरु हुन । अलि बढि काम गर्ने अफिस भनेको होटल नै हो किनकी होटलमा आवश्यक परेका अन्य टोटल पाउँछन् । फरक हाकिम, फरक अफिस तर एउटै काम । यस्तै छ मेरो जीवन, यस्तै छ कहानी । यसरी नै चलिरहेको छ ।
तपार्इहरुले बुझ्‍ने सीधा भाषामा भन्‍नुपर्दा मैले शरिर बेच्‍ने काम गर्छु त्यो पनि अनेकन मान्छेहरुसँग । म त भालु, वेश्या, रण्डी हो क्यारे । सानो मान्छेले ठूला कुरा गर्न पनि आउँदैन तर केही मनमा लागेका कुराहरु व्यक्त गर्न मात्र खोजेकी हुँ । सानो मान्छेले ठूला कुरा गरी नभन्‍नु है ।
मान्छे जीउँदो रहनका लागि कुनै न कुनै अंग प्रयोग गरेकै हुन्छ । शरिर नबेचेर को बाँचेको छ र ! यो संसारमा र को बाँच्‍न सक्छर ? तपार्इहरुले मलार्इ शरिर बेच्‍ने महिला भनेर भन्‍नुहुन्छ । के शरिर भनेको प्रजनन अंग मात्र हुन् ? टाउको, नाक-कान, अनुहार, घाँटी, हात-खुट्टा शरिर भित्र पर्दैनन् ? यो त भन्‍ने कुरा नै हैन नी, सबैले बुझ्‍ने कुरा हो ।
कसैले मष्तिष्क बेचिरहेका छन्, कसैले अनुहार बेचिरहेका छन्, कसैले जिब्रो बेचिरहेका छन्, कसैले हात बेचिरहेका छन् भने कसैले खुट्टा बेचिरहेका छन् । सबैले शरिर नै बेचिरहेका छन् र बेच्‍नुपर्छ किनकी शरिर नबेचेर बाँच्‍न सम्भव नै छैन । जस्तैः- भरियाले पिँठ्यू बेचिरहेको हुन्छ, नेताहरुले बोली बेचिरहेका हुन्छन्, नायक-नायिकाले अनुहार बेचिरहेका हुन्छन् भने गायक-गायिकाले स्वर बेचिरहेका हुन्छन् यी यस्तै आदि ।
यो संसारमा जोसँग जे छ, जसले जे गर्न सक्छ त्यही त गर्ने हो नी । तपार्इहरुले अरु अंगहरु बेचिरहनु भएको छ, तपार्इलार्इ त्यही ठीक लाग्यो त्यही गर्नुभयो अनि मैले प्रजनन् बेचिरहेकी छु, मलार्इ यही ठीक लाग्यो मैले यही गरेँ । मैले तपार्इलार्इ कहिल्यै यस्तो उस्तो भनिन तर तपार्इले मलार्इ भालु, रण्डी, वेश्या किन भन्‍नुभयो ? जवाफ चाहिन्छ मलार्इ । तपार्इहरुले मलार्इ भालु, रण्डी, वेश्या भन्‍न प्रयोग गर्ने तपार्इको जिब्रो र भालु, रण्डी, वेश्या सोच्‍ने तपार्इहरुको मष्तिष्क पनि शरिरका अंगहरु भित्र पर्छन् भन्‍ने कुरा तपार्इहरुले कहिल्यै विर्सनु हुँदैन ।
अनि मेरो ओठसँग मिलाउने तपार्इको ओठ, मेरा स्तनसँग मिलाउने तपार्इका स्तन, मेरो शरिरका विभिन्‍न अंगहरुमा सुम्सुम्याउने तपार्इका हात, भर्खर जन्मेको पाडोलार्इ भैँसीले चाटे जसरी मेरो पाउदेखि शिरसम्म चाट्ने तपार्इको जिब्रो, मेरो योनीभित्र घुसाउने तपार्इको लिङ्ग पनि शरिरका अंगहरुभित्र नै पर्छन भन्‍ने कुरा पुरुष साथीहरुले विर्सनु हुँदैन ।
त्यस्तै सेक्सलार्इ र्इज्जतको रुपमा लिएर सेक्स गर्न पाए हुन्थ्यो भन्‍ने चाहाना हुँदाहुँदै पनि नभएको र्इज्जत पनि जाला भन्‍ने डरले जवरजस्ती चाहाना थन्क्याएर बस्‍नु हुने र्इज्जतदार महिला मित्रले के बुझ्‍न जरुर छ भने मेरो जस्तै तिम्रो ओठ, मेरा जस्तै तिम्रा स्तन, मेरो जस्तै तिम्रो योनी पनि शरिरका अंगहरुभित्र पर्छन भन्‍ने कुरा बुझिरहन अनुरोध गर्दछु ।
सेक्स सम्बन्ध राख्‍न पाए हुन्थ्यो भन्‍ने चाहाने भएको तर सेक्स आनन्द लिने प्रमुख अंग योनीलार्इ र्इज्जतको प्रतिक मानेर पुजा गर्ने महिला मित्रहरुलार्इ म सँधै भनिरहन्छु की, तिमी र म वीच कुनै अन्तर छैन, तिम्रा पनि प्रजनन् अंग, मेरा पनि प्रजनन् अंग, तिम्रो पनि चाहा, मेरो पनि चाहा, मात्र तिमी चाहानाहरुलार्इ थन्काएर राख्छ्यौ र म खुलेर चाहाना पूरा गर्छु । (तिमीलार्इ सबैले सावित्री भन्छन्, मलार्इ सबैले वेश्‍या भन्छन् ।)
तिमीलार्इ पनि प्यास लाग्छ र मलार्इ पनि प्यास लाग्छ, मात्र तिमी एउटै कुवाको पानीले प्यास मेटाउनुपर्छ भन्‍ने मान्यता राख्छ्यौ अनि म चाहिँ जतिबेला प्यास लाग्छ, जहाँ कुवा भेटिन्छ त्यहीँ प्यास मेटाउनुपर्छ भन्‍ने मान्यता राख्छु । वश यति अन्तर छ तिमी र म वीच ।
म त सेक्सको बारेमा खुलेर गर्ने मान्छे हो र गरिरहन्छु पनि । सेक्स जीवनको आधारभूत आवश्यकता हो । तपार्इ आफै भन्नुहोस त यदि आवश्यकता थिएन भने पैँसा तिरेर किन मसँग आउनुहुन्छ ? यदि आवश्यकता थिएन भने क्षणिक आनन्दका लागि किन मान्छेले बलत्कार गर्ने आँट गर्छ ? मलार्इ भालु भनिनु र बलत्कारका घटनाहरु बढ्नुको एउटै कारण छ त्यो हो सेक्सलार्इ सकारात्मक तरिकाले बुझ्न नसक्नु । हो यही तपार्इको मनमा अन्धो भएर बसेको सोचलार्इ बदल्नका लागि मैले हर कोशिस गरिरहेकी छु र गरिरहनेछु पनि ।
म चौध वर्षकी हुँदा तीन जना यूवाबाट बलत्कृत भएकी थिएँ । तीन जना यूवालार्इ बाह्र वर्ष जेल सजाय भएको छ र आजपनि ती यूवाहरु जेलभित्र नै छन् । मलार्इ केही भएको थिएन मात्र योनीबाट थोरै रगत बग्‍नु बाहेक । म त्यतिबेला अबुझ थिएँ, अञ्जान थिएँ त्यसैले होला सेक्सको फिलिङ्स हुन्थेन । यूवाहरु १८/१९ वर्षका हुँदाहुन् त्यतिबेला । १८/१९ वर्षका भएकोले उनीहरुलार्इ मप्रति सेक्सको फिलिङ्स आयो होला र त मलार्इ जवरजस्ती गर्न बाध्य भएका थिए होला । झट्ट हेर्दा उनीहरु कानूनको नजरमा दोषी होलान तर गहिएर सोच्‍ने हो भने उनीहरु दोषी हैनन् । म उनीहरुलार्इ दोषी कहिल्यै पनि ठान्दिन ।
जवरजस्ती किन गर्‍यौ भन्दापनि जवरजस्ती गर्नै पर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो ? यसको मूल समस्याको केन्द्र कहाँ छ ? भन्‍ने प्रश्‍न उठ्नुपर्छ । घर बलियो बनाउनका लागि जग बलियो हुनुपर्छ भन्‍ने त सबैलार्इ थाहै होला क्यारे । कुनै विरुवा जराबाट नै सुक्दै आएको छ भने दुर्इ/चार ओटा हाँगा काटेर फाल्दैमा केही हुनेवाला छैन । बलत्कार गर्नेलार्इ १२/१३ वर्ष जेल हाल्दैमा केही हुनेवाला छैन, जबरजस्ती कसैको आधारभूत आवश्यकता दबाउन मिल्दैन । यो तरिकाले कहिल्यै पनि बलत्कारीको संख्या घट्नै सक्दैन ।
बलत्कारीलार्इ १२/१३ वर्ष जेल सजाय गर्नुभन्दा सेक्सको बारेमा १२/१३ ओटा कुरा सिकाउन जरुर छ । सेक्सलार्इ सामान्य रुपमा बुझ्‍न र बुझाउन जरुर छ । सेक्स स्वतन्‍त्र हुन जरुर छ । हैन भने सबैका प्रजनन अंग झिकेर फाल्ने नियम बनार्इनुपर्छ । त्यसपछि न प्यास लाग्छ, न प्यास मेटाउनुपर्छ, न कोही बलत्कृत हुन्छ, न कसैले कसैलार्इ बलत्कार गर्छ, न म सेक्सको व्यवसाय गर्छु, न मलार्इ कसैले भालु, वेश्या र रण्डी नै भन्‍नुपर्ने अवस्था आउँछ ।
यदि ती यूवाहरु जन्मिनु पुर्वदेखि नै सेक्सलार्इ स्वभावकि ठानिएको भए, न ती यूवाहरुले मलार्इ बलत्कार गर्न बाध्य हुन्थे, न आज उनीहरु जेलभित्र जानुपर्थ्यो । यो सबैको दोषको भागेदार तपार्इहरु नै हो, जो सेक्सलार्इ नकारात्मक सोच्‍नुहुन्छ, जसले सेक्सलार्इ दबाएर राख्‍न खोज्‍नुहुन्छ । ती यूवाहरुको बाउ-बाजेको पालादेखि नै सेक्सलार्इ सबैले सामान्य रुपमा बुझ्दै आएको भए आज यस्तो समस्या अाउने नै थिएन । सबैले सेक्सलार्इ सामान्य ठानिन्थ्यो भने जसको जोसँग चाहाना जाग्थ्यो अनि दुवैको सहमतिमा दुवैले प्यास मेट्थे । कसैलार्इ पनि मरिहत्य गर्नै पर्दैनथ्यो ।
यो अञ्‍जलीका स्तन कत्रा होलान् ? अञ्‍जलीको योनी कस्तो होला ? अञ्‍जलीको ओठमा किस गर्दै स्तन छुँदै योनीमा लिङ्ग घुसाउन पाए कस्तो हुन्छ होला ? भन्‍ने मनमा लाग्यो होला र त ती यूवाहरुले मलार्इ बलत्कार गरे । यदि पहिलेदेखि नै प्रजनन अंगहरुलार्इ सामान्य रुपमा लिदैँ आएको भए ती यूवाहरुलार्इ मेरा अंगहरुप्रति महत्व बढ्दैनथ्यो र मलार्इ बलत्कार गर्नुपर्ने आवश्यक नै हुन्थेन ।
अरुको नजरमा दोषी तर मेरो नजरमा निर्दोष ती तीन यूवाहरु अबको दुर्इ वर्षभित्र जेलमुक्त हुनेछन र म उनीहरुको घर गएर सर्वप्रथम माफि माग्‍नेछु । त्यसपछि उनीसँग पालैपालो सेक्सका लागि अनुरोध गर्नेछु । उनीहरुले सहमति जनाएनन् भने पैँसा दिएर भएपनि कन्भेन्स गर्ने प्रयास गर्नेछु र यदि पैँसा दिएर पनि मानेनन भने जबरजस्ती गर्नेछु । अनि मेरो नाममा अदालतमा जवरजस्ती करणीको मुद्दा दायर हुनेछ, त्यसपछि मलार्इ पनि कानून बमोजिम सजाय सुनार्इनेछ र म खुशीका साथ जेल जानेछु । अनि तपार्इहरुले मलार्इ अर्को उपनाम दिनुहुनेछ “अपराधी” ।
मेरो विवाह चार वर्षअघि भएको थियो तर अहिले श्रीमान र मेरो सम्बन्ध विच्छेद भर्इसकेको छ । हाम्रो विवाह भएको सात महिनापछि श्रीमान रोजगारको शिलशिलामा कतार जानुभएको थियो । कतार गएको दुर्इ/चार महिना जति भएको थियो, मेरो गाउँमा एक जना गाउँकै पुरुषसँग सेक्स सम्बन्ध हुन थाल्यो । मैले केही बिगारेकी हैन मात्र आधारभूत आवश्यकता पुर्ति गरेकी हुँ । मैले विवाह गर्नुभन्दा अघि पनि सात/आठ जनासँग सेक्स सम्बन्ध राखिसकेकी थिएँ । श्रीमान घरमा हुँदा श्रीमानबाट मेटार्इने प्यास श्रीमान नभएपछि अरुबाट प्यास मेटाएकी मात्र हुँ । श्रीमान घरमै हुँदा पनि दुर्इ/चार पटक त अरुसँग पनि सेक्स सम्बन्ध राखिसकेकी थिएँ । सँधै श्रीमानसँग मात्र फिलिङ्स आउँछ भन्‍ने पनि त छैन नी हैनर । अर्को कुरा श्रीमानले अरु महिलासँग सेक्स सम्बन्ध राखेको दुर्इ/चार पटक त मैले मेरै आँखाले पनि देखेकी थिएँ तर म सेक्सलार्इ स्वाभाविक रुपमा लिन्छु त्यसैले मलार्इ कुनै फरक परेन ।
श्रीमान कतार गएको एक वर्षपछि हतार-हतार गरेर घरमा आउनुभयो र गाउँका ठूला वडा भलादमीलार्इ बोलाएर सम्बन्ध विच्छेद गर्छु भन्‍नुभयो र मैले पनि हजुरको चाहाना जे छ त्यही गर्नुहोस भनेर सहमति जनार्इहालेँ । के कारण हो भनेर सोधिन तर पछि थाहा भयो मैले अरु पुरुषसँग राख्‍ने गरेको नैतिक सम्बन्धको बारेमा कसैले सबै वृतान्त सुनाएछ क्यारे । अरुले यस्तो सम्बन्धलार्इ अनैतिक सम्बन्ध भन्छन तर म नैतिक भन्छु किनकी मैले जवरजस्ती हैन सहमति अनुसार यस्तो सम्बन्ध राखेकी हुँ र राख्‍ने गरेकी छु । मैले आफ्नो पारिवारिक कुरा किन जोड्न खोजेको भन्दा यदि मेरो श्रीमानले सेक्सलार्इ सकारात्मक तरिकाले बुझ्‍नु हुन्थ्यो भने हाम्रो सम्बन्ध विच्छेद हुँदैनथ्यो । यो समस्या हाम्रो घरको मात्र हैन, यो समस्या अहिले जताततै भार्इरल बनिरहेको छ । जति पनि श्रीमान/श्रीमती वीच सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ, जति पनि बलत्कार हुन्छन यी सबैको एउटै कारण हो सेक्सलार्इ स्वभाविक रुपमा बुझ्‍न नसक्नु ।
आजभोली मैले सेक्सलार्इ व्यवसायिक रुपमा अघि बढार्इरहेकी छु । कसैलार्इ पैँसा दिन्छु त कसैबाट लिन्छु । तपार्इलार्इ लाग्न सक्छ ? किन तपार्इले सेक्स गराएको पैँसा लिनुहुन्छ भनेर । हो म सेक्स गराएको पैँसा लिन्छु तर सेक्स गरेको पैँसा लिन्‍न, अझ मैले धेरैजसो त सेक्स गरेको पैँसा दिने गरेकी छु । यदि तपार्इलार्इ मसँग सेक्स गर्न चाहाना छ तर तपार्इप्रति मेरो फिलिङ्स छैन भने यो अवस्थामा म पैँसा लिन्छु किनकी मैले तपार्इलार्इ फिलिङ्स नहुँदा नहुँदैपनि तपार्इको चाहाना पूरा गरिदिएकी हुन्छु । यदि कोही मान्छेसँग मलार्इ सेक्स गर्न मन लाग्यो तर उसको मप्रति फिलिङ्स छैन भने म उल्टो पैँसा दिएर सेक्स गर्ने गर्छु । मेरो तपार्इप्रति र तपार्इको मप्रति फिलिङ्स आयो र सहमतिमा भयो भने न म तपार्इलार्इ पैँसा दिन्छु, न म तपार्इबाट पैँसा लिन्छु, मात्र तपार्इलार्इ आनन्द दिन्छु र तपार्इबाट म आनन्द लिन्छु ।
एक रातको कुरा हो । तीनजना भुसतिघ्रेहरुसँग एक्लै होटलमा गएँ । एटेज बाथरुम सहितको सुविधा सम्पन्‍न कोठा थियो भनम । रातको ९ बजेको हुँदो हो । खाना खार्इसकेपछि जे कामका लागि आर्इएको हो त्यो काम त शुरु गर्नु पर्‍यो नै । नढाँटिकन भन्दाखेरी तीजजना मध्ये एउटासँग मेरो फिलिङ्स नै आएको थिएन त्यसैले त्योबाट पैँसा लिएँ, अर्को एकजनासँग दुवैको बराबरी फिलिङ्स र चाहाना अनुसार भयो त्यसैले पैँसा दिर्इन र लिर्इन पनि । अर्को बाँकी एकजनाले मसँग चाहानै देखाएन र मसँग सेक्स राख्‍न चाहेन तर मेरो चाहाना चाहिँ अत्यन्तै बढेर आयो उप्रति र मैले पैँसा दिएर भएपनि राजी गराएँ र आफ्नो आनन्द लिएँ । भोलिपल्ट बिहान मैले होटल बस्‍न लागेको खर्च आफै तिरेर आफ्नो घरतिर लागेँ ।
जसले मलार्इ पैँसा दिएर मबाट आनन्द लिएको थियो उसले नै सबैभन्दा बढि भालु, रण्डी, वेश्या सोचेको हुँदो होला सायद मलार्इ । जसले रातभरी ‍अञ्जली-अञ्जली, अलिअलि भन्दै, भालुलार्इ कालु-कालु भन्दै भालुकै शरिरलार्इ सर्वोस्व ठानेर स्वर्गकै आनन्द लिएको थियो उसले नै बिहान भालु, रण्डी, वेश्याको नाम दिन्छ । भालुकै शरिर प्रयोग गरेर स्वर्ग पुग्‍ने तपार्इहरु जस्ता ठुल-ठालुलार्इ मैले के नाम दिने ? मैले तपार्इहरुलार्इ कसरी बुझ्ने ? मैले पनि त तपार्इहरुलार्इ मेरो जस्तै उपनाम दिन सक्छु होला तर म त्यसो गर्दिन किनकी तपार्इलार्इ नकरात्मक सोच्दिन, नकरात्मक किन सोच्दिन भन्दा त म सेक्सलार्इ स्वभाविक ठानेर आधारभूत आवश्यकता मान्छु । मैले सेक्सलार्इ आधाभूत आवश्यकता नमानेपनि केही फरक पर्दैन किनकी सेक्स प्राकृतिक कुरा हो, सेक्स आफैमा आधारभूत आवश्यकता हो ।
अन्ततः मैले दर्शाउन खोजेको तात्पर्य भनेको सेक्सलार्इ सकारात्मक तरिकाले बुझिनुपर्छ भन्‍ने हो । जबसम्म सेक्सलार्इ दबाएर राखिन्छ, जबसम्म सेक्स स्वतन्त्र हुँदैन, तबसम्म विभिन्‍न प्रकारका विकृतिहरु दिनानुदिन बढ्दै जानेछन् । मैले तपार्इहरुलार्इ यौनलार्इ पेशा बनाएर हिड्नुहोस भन्‍न खोजेकी हैन, मात्र यदि कसैले कसैसँग सहमति अनुसार सेक्स गर्छ भने त्यसलार्इ स्वभाविक मान्‍नुहोस् । तपार्इलार्इ प्यास लाग्छ मेटाउनुहोस् प्यास लाग्दैन नमेटाउनुस् तर अरुलार्इ अनावश्यक डिस्टप नगर्नुहोस् ।
कसैकी श्रीमती र कसैको श्रीमान, कसैकी (Girl friend) र कसैको (Boy friend), कुनै एउटा पुरुष, कुनै एउटा महिला राजीखुशीका साथ सेक्स गर्छन भने तपार्इको के को टाउको दुःखार्इ ? उनीहरु त्यसमै खुशी छन् भने तपार्इलार्इ के को आपत्ति ? अरुको खुशी देख्‍न सक्‍नुहुन्‍न भने बाँचेर काम छैन आत्महत्या गर्नुहोस् । हामी यस्ता वेवकुब भर्इसकेका छौँ की हामीलार्इ अरुको नकरात्मक टिकाटिप्पणी गर्नु शिवाय अरु केही आउँदैन । आफू को हुँ भनेर जान्‍न चाहादैनौँ तर अरुको खुव मूल्याङ्कन गर्न खोज्छौँ त्यो पनि नकरात्मक मात्रै ।
आजैदेखि अहिलेदेखि नै सेक्सलार्इ स्वभाविक रुपमा लिनुहोस्, स्वतन्त्र रुपमा लिनुहोस्, सामान्य रुपमा लिनुहोस् र आधरभूत आवश्यकताको रुपमा लिनुहोस् अनि बन्‍नेछ हिंसामुक्त समाज, अनि हट्नेछन् बलत्कारका घटनाहरु, अनि हट्नेछन् सम्बन्धविच्छेदहरुका घटनाहरु, अनि घट्नेछन् लव छुट्ने घटनाहरु, त्यसपछि बन्‍नेछ तपार्इको सुन्दर जीवन । तपार्इले चाहे जस्तै जीवन । वश यति गरे हुन्छ ।
जय सेक्स ! जय जीवन !!
(नोटः अञ्‍जली कुनै वास्तविक पात्र हैन । मात्र मैले आफ्नो विचारलार्इ प्रस्तुत गर्नका लागि अञ्जली पात्रको सहयोग लिएको हुँ । कुनै वास्तविक अञ्‍जलीलार्इ मेल खान गएमा त्यो एउटा संयोग मात्र हुनेछ । र यस लेख पढिसकेपछि आउन सक्‍ने सकारात्मक तथा नकारात्मक टिकाटिप्पणीको भागेदार म स्वयंम हुने कुरा प्रतिबद्धता जनाउँछु । )